UYesu Wafunda Ukuthobela | Fundisa Abantwana Bakho
TEACH YOUR CHILDREN UYesu Wafunda Ukuthobela
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiBhulu IsiBulgarian IsiCebuano IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiFinnish IsiFrentshi IsiGrike IsiGun IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKorea IsiLatvia IsiLithuania IsiMalagasy IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRomania IsiSerbia IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwedish IsiTagalog IsiTelugu IsiThai IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiUkrainian IsiVietnam IsiXhosa IsiZulu
IMboniselo | 2010-04-01
UYesu Wafunda Ukuthobela
NGABA ukhe ukufumanise kunzima ukuthobela?— * Ukuba kunjalo, ayimangalisi loo nto. Wonke umntu ukhe akufumanise kunzima ukuthobela. Ngaba ubusazi ukuba noYesu kwafuneka afunde ukuthobela?—
Ngaba uyazi ukuba abantwana bafanele bathobele bani?— Bafanele bathobele oomama nootata babo. IBhayibhile ithi: “Bathobeleni abazali benu ngokumanyene neNkosi.” (Efese 6:1) Ngubani utata kaYesu?— NguYehova uThixo ibe ukwanguTata wethu nathi. (Mateyu 6:9, 10) Kodwa ke unyanisile naxa usithi, abazali bakaYesu yayinguMariya noYosefu. Ngaba uyazi ukuba kwenzeka njani ukuba babe ngabazali bakhe?—
Ingelosi uGabriyeli yaxelela uMariya ukuba wayeza kuzala umntwana nangona wayengenandoda. UYehova wenza ukuba uMariya akhulelwe ngokungummangaliso. UGabriyeli wathi kuye: “Amandla Oyena Uphakamileyo aya kukusibekela. Ngenxa yeso sizathu kwanoko kuzalwayo kuya kubizwa ngokuba kungcwele, uNyana kaThixo.”—Luka 1:30-35.
UThixo wafudusa ubomi boNyana wakhe ezulwini waza wabufaka kuMariya. Emva koko, uYesu wakhula esibelekweni sikaMariya njengabanye abantwana. Wazalwa malunga neenyanga ezilithoba emva koko. Ngelo xesha uYosefu watshata noMariya yaye inkoliso yabantu yacinga ukuba uYosefu wayengutata kaYesu. Kodwa ke uYesu wayengazalwa nguYosefu kunoko wayekhuliswa nguye. Ngaloo ndlela singathi uYesu wayenootata ababini.
Xa wayeneminyaka eli-12 ubudala, uYesu wenza into eyayibonisa indlela awayemthanda ngayo uYehova. Ngeloo xesha intsapho yakowabo yaya ePasikeni eYerusalem njengesiqhelo. Endleleni ebuyela eNazarete uYosefu noMariya abazange baphawule ukuba uYesu wayengekho. Ngaba uyazibuza ukuba kwenzeka njani ukuba bangayiboni loo nto?—
Kaloku ngeloo xesha uYosefu noMariya babenabanye abantwana. (Mateyu 13:55, 56) Kusenokwenzeka ukuba babehamba nezalamane zabo, njengoYakobi noYohane, utata wabo uZebhedi nomama wabo uSalome ekusenokwenzeka ukuba wayengudade boMariya. Mhlawumbi uMariya wacinga ukuba uYesu wayehamba nezinye izalamane zabo.—Mateyu 27:56; Marko 15:40; Yohane 19:25.
Xa uYosefu noMariya bafumanisa ukuba uYesu wayengekho phakathi kwabo babuyela eYerusalem. Bamkhangela kuyo yonke indawo. Bamfumana etempileni ngosuku lwesithathu. UMariya wathi kuye: “Bekutheni na ukuze usiphathe ngale ndlela? Naku mna noyihlo sibandezelekile engqondweni sifunana nawe.” Kodwa ke uYesu wamphendula wathi: “Bekutheni na ukuze nihambe nifunana nam? Beningazi na ukuba ndimele ndibe sendlwini kaBawo?”—Luka 2:45-50.
Ngaba ucinga ukuba uYesu wayengafanele amphendule ngolo hlobo umama wakhe?— Kaloku abazali bakhe babesazi ukuba wayekuthanda ukunqula uThixo endlwini yakhe. (INdumiso 122:1) Ngenxa yoko uYesu wayelindele ukuba baqale etempileni xa bemkhangela.—UMariya akazange ayilibale into eyathethwa nguYesu.
Ngaba uYesu wayemhlonela uYosefu noMariya?— IBhayibhile ithi: “Wehla kunye nabo waza wafika eNazarete, yaye waqhubeka ezithobile kubo.” (Luka 2:51, 52) Sifunda ntoni kuYesu?— Sifunda ukuba nathi sifanele sibathobele abazali bethu.
Kodwa ke, kwakungasoloko kulula kuYesu ukuthobela—ngamanye amaxesha kwakusiba nzima nokuthobela uYise wasezulwini.
Kubusuku bangaphambi kokuba afe, uYesu wacela uYehova ukuba ayitshintshe intando yakhe ngaye. (Luka 22:42) Kodwa ke uYesu wamthobela uThixo nangona kwakunzima. IBhayibhile ithi “wafunda ukuthobeka ngeembandezelo awazifumanayo.” (Hebhere 5:8) Ngaba ucinga ukuba kukho nto sinokuyifunda nathi apha?—
^ isiqe. 3 Ukuba ufundisa umntwana, isikhewu senzelwe ukuba umvumele aphendule.
Mariya waba nguye njani umama kaYesu, yaye kwenzeka njani ukuba uYesu abe nootata ababini?
Kwakutheni ukuze abazali bakaYesu bangaboni ukuba wayesele ngasemva?
UYesu wayelindele ukuba bamkhangele phi abazali bakhe?
Ufunda ntoni kumzekelo kaYesu?